COVID-19 (SARS-CoV-2) Inorerizing Antibody Bvunzo
Anti-SARS-COV-2 Neutralizing Antibody Bvunzo (Immunochromatography) ndeyekutarisa in vitro hunhu hwehutachiona hunodzora hunopesana neSARS-CoV-2 mune yemunhu serum kana plasma masampuli.Masovhosi ekudzivirira anopesana neSARS-CoV-2 anogona kuvharira kudyidzana pakati peiyo receptor inosunga domain yehutachiona spike glycoprotein (RBD) pamwe ne angiotensin inoshandura enzyme-2 (ACE2) cell surface receptor. Iyo yekuyedza inogona kushandiswa kutsvaga chero antibody mu serum uye plasma iyo inogadzirisa kusangana kweRBD-ACE2. Muedzo unozvimiririra nemhando uye isotype.
Ichi chigadzirwa chinoshandiswa kuunganidza hutachiona hwekuona masampuli kubva pahuro kana mumhino, uye iwo masabhi esabha achachengetwa mutsika yepakati, ayo anogona kushandiswa kutsvaga hutachiona, tsika uye kuzviparadzanisa.
Iyo HIV-1/2 Ab Plus Combo Rapid Bvunzo ndeye lateral kuyerera immunoassay yekuona panguva imwe chete uye kusiyanisa anti-HIV-1 uye anti-HIV-2 antibodies (IgG, IgM, IgA) muvanhu serum, plasma, kana yakazara ropa. Inoitirwa kuti ishandiswe sekuyedza kuongorora uye semubatsiro pakuonekwa kwehutachiona neHIV.